Fa maninona aho no mijanona miaraka amin'ny Apple Music aorian'ny fotoam-pitsapana | Vaovao IPhone
Tonga ny 30 septambra, ary aorian'ny fizahan-toetra mandritra ny telo volana izay nahafahan'ny Apple Music tanteraka, fotoana tokony hanapahana hevitra raha te hanohy hampiasa azy io isika na, ny mifanohitra amin'izay, te-hisoratra anarana izahay ary hanohy amin'ireo mpifanandrina aminy , na ataovy tsotra izao tsy misy mozika mivantana. Efa ela ny fanapahan-kevitra noraisiko, saingy izao aho afaka milaza fa manana izany mazava kokoa aza, ary Hanohy amin'ny Apple Music namela ny famandrihako Premium ho Spotify aho. Ireo no antony manosika ahy.
1 Trano famakiam-boky ho an'ny rehetra
2 Library amin'ny iCloud
3 Ny drafitry ny fianakaviana, fanamaivanana ho an'ny sofiko
4 Fampiharana iray mbola eo am-piandohany fa hihatsara izany
5 Fampidirana tanteraka ny rafitra
6 Na dia mbola misy lesoka aza
Trano famakiam-boky ho an'ny rehetra
Voatsikera i Apple satria tsy nitovy tamin'ny an'ny iTunes ny fitehirizam-bokin'ny Apple Music. Marina fa misy mpanakanto sy / na rakikira amidy amin'ny iTunes fa tsy misy amin'ny Apple Music, toy ny katalaogin'ny mozika Beatles iray manontolo. Saingy aorian'ny telo volana dia tsy misy mpanakanto na rakikira tokana tiako hananana ao amin'ny tranombokiko ary tsy hitako tao amin'ny Apple Musicafa-tsy ny Beatles. Mety tsy ho lehibe noho ny Spotify ny tranombokinao, fa tsy kely kokoa koa. Nandritra io fotoam-pitsapana io dia fantatro tsara hoe iza avy ireo tokan-tena sy rakikira tonga tao Spotify ary nitady azy ireo avy hatrany tao amin'ny Apple Music, ary tsy nahita zavatra tsy hita tao amin'ity farany aho.
Library amin'ny iCloud
Izay serivisy ampiasainao dia mampifanaraka ny mozika nampianao tamin'ny fitaovanao rehetra, fa ny Apple Music kosa dia mandeha lavitra kokoa: raha misy rakikira izay anananao izay tsy hita ao amin'ny katalaoginy koa manampy azy ao amin'ny tranombokinao iCloud ary hiseho amin'ny fitaovanao rehetra izany. Hampifangaro ny tranomboky mozika misy anao, na ny Apple Music na ny anao, ary amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny safidy iCloud, dia hiseho amin'ny fitaovana rehetra nampifandraisinao tamin'ny kaontinao izany. Aza adino ny mampiasa Spotify handefasana mozika sy mozika ho anao, hanana serivisy tokana sy fampiharana iray ianao.
Ny drafitry ny fianakaviana, fanamaivanana ho an'ny sofiko
Ho an'ny € 14,99 dia azoko atao ny manampy kaonty 6 amin'ny Apple Music, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manana tranomboky mozika samirery. Mihoatra ny tsy maintsy hizarako ny tranombokiko amin'ny vadiko, ary ambonin'izany rehetra izany dia vita rehefa nijanona tsy nilalao mozika ny iPhone rehefa mandeha miasa aho satria ny vadiko ao an-trano koa dia nanomboka nihaino mozika. Na dia manana kaonty tokana aza ianao dia afaka mihaino ny Apple Music amin'ny fitaovana maro miaraka, fa raha misafidy ny kaontin'ny fianakaviana koa ianao, dia ampitomboina enina ny safidy, ary koa misy tranomboky tsy miankina.
Eny, Spotify dia manana drafitry ny fianakaviana, saingy tsy dia mahaliana ara-toekarena: ny fihenam-bidy tsirairay dia manana fihenam-bidy 50%, midika izany fa amin'ny vidin'ny kaontin'ny fianakaviana Apple Music ao amin'ny Spotify dia manana kaonty roa ianao (ho an'ny serivisy enina an'ny Apple). Google Play Music androany dia nandefa safidy mitovy amin'ny an'i Apple, fa ho ahy dia efa tara izy.
Fampiharana iray mbola eo am-piandohany fa hihatsara izany
Eny, marina fa ny rindrambaiko Music dia natomboka tamina glitches tsy azo avela, fa marina ihany koa fa nihatsara be ny interface tamin'ny fahatongavan'i iOS 9, ary nasiana fiasa vaovao. Na izany aza, ny mozika amin'ny iOS dia mila manatsara bebe kokoa, saingy tsy manana ahiahy aho fa hanao izany. Apple dia niloka mafy tamin'ity serivisy ity ary mbola lavitra ny lalana. Zavatra iray izay, na izany aza, tsy mazava amiko manontolo amin'ny Spotify, na farafaharatsiny tsy hoe mitovy amin'ny hafainganam-pandeha izany. Misy mahatadidy ny faharetan'ny fanavaozana ny interface amin'ny efijery iPhone 6 Plus? Tsy mila mandeha lavitra koa isika ... mbola miandry fampiharana ho an'ny Apple Watch izahay tsy tonga izany ary efa volana vitsivitsy izay.
Fampidirana tanteraka ny rafitra
Fanabeazana fototra fa tsy mijanona ho zava-dehibe izany: Ny fampidirana Apple Music miaraka amin'ny iOS dia mahatratra ambaratonga izay tsy hahatratra ny Spotify. Amin'ity tranga ity dia tsy Spotify ny lesoka fa ny fetra apetrak'i Apple, fa na inona na inona fahasamihafana misy. Siri dia nanjary fomba lavorary hifehy ny famerenanao mozika ary ankehitriny, miaraka amin'ny iPhone 6s sy 6s Plus vaovao mihaino hatrany, mampiasa Apple Music amin'ny feo dia zava-misy. Ary tsy i Siri ihany, fa ny rafitra fikarohana fikarohana vaovao, Apple Watch, sns.
Na dia mbola misy lesoka aza
Ny fanapahan-kevitrao hanohy amin'ny Apple Music dia tsy midika hoe tsy fantatrao fa ny serivisy mozika streaming an'i Apple dia mbola misy lesoka lehibe ihany. Ny tolo-kevitry ny mozika nomeny ahy amin'izao fotoana izao dia tsy hoe tena marina izy ireo, na dia iray amin'ireo toetra mampiavaka ny Apple Music aza izany. Heveriko ihany koa fa ny lafiny sosialy amin'ny fampiharana dia tena atao ambanin-javatra, satria tena tsara ny lohahevitra Connect, fa tiako ny mahita ny lisitry ny mpampiasa mozika mety mahaliana ahy ary afaka manampy azy ireo ao amin'ny tranombokiko. Ary tsara kokoa raha tsy miresaka momba ny traikefan'ny mpampiasa Apple Music ao amin'ny OS X amin'ny alàlan'ny iTunes ... Fa araka ny nolazaiko teo aloha dia telo volana monja taorian'ny nanombohany ary ny tsara indrindra mbola ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Music » Fa maninona aho no mifikitra amin'ny Apple Music aorian'ny fotoam-pitsapana
astate dia hoy izy:
Omaly dia nofoanako ny famandrihako Apple Music, misaotra anao nanampy ahy nanamafy fa fanapahan-kevitra tsara izany.
Mamaly an'i astatus
Nacho.com dia hoy izy:
Andao, mandeha tsy misy filazana fa na dia ratsy aza ny Apple Music dia mifikitra aminy ianao satria tsapanao izany.
Mamaly an'i Nacho.com
Mampihoron-koditra ny Apple Music .. sa holazainao amiko fa manana ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitrao ianao ary tsy misy fihemorana? Na tsy naharitra tapa-bolana akory ianao vao afaka nampakatra ny iray amin'ireo hiranao nampidirina tao amin'ny Icloud ary tamin'ny fitaovana hafa rehetra dia niseho fotsy ihany ilay hira nefa tsy afaka nihaino azy?
Valiny tamin'i Felipe Vasquez
Fantaro raha manana ny processeur A6 avy amin'ny Samsung na TSMC ny iPhone 9s anao
Famerenana tranga tranga fotsiny an'ny AluFrame iPhone 6 Plus